Lozan'ny Ecosystem | Reef Resilience
Ny fitrandrahana karbaona manga (ala honko, sira-mozika, ary seagrass) dia simba sy simba eran-tany noho ny asa ataon'ny olombelona. Ny antony mahazatra dia ny: famerenana ny tany ho an'ny fanorenana, ny fandripahana ala ho an'ny hazo sy ny fampandrosoana, ny fiovam-ponenana any amin'ny lakandranomasina, ny zana-tany sy ny fandotoana ny ranomasina, ary ny fampandrosoana amoron-dranomasina. Ny fihenan'ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fampiroboroboana dia nahatonga ny fihenan'ny alikaola, ary ny ala honko sy ny solika dia simba noho ny familiana, famenoana, fandikana, draina ary karazana fanodinana. Ireo fiantraikany ireo dia andrasana hitohy ary azo inoana fa mihamitombo ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fitomboan'ny mponina.
Ny fiovan'ny toetr'andro dia mety hisy fiantraikany amin'ny filentehan'ny karbonina manga sy ny fivoaran'ny fihodinan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanovana ao amin'ny faritra misy azy ireo, ny firafitra sy ny fitomboana ary ny vokatra ary ny fanomezana alalana avy any ambony sy ambanin'ny tany. ref Ohatra, ny fiposahan'ny ranomasina dia mety hanimba ny ala honko sy ny honahona ary hampitombo ny rano lalina eo ambonin'ny ahidrano, ka hampihena ny fahazavana hanohanana ny fitomboan'ny zavamaniry. Mety hahatonga ny fahaverezan'ny ahidrano mitombo ihany koa ny mari-pana amin'ny ranomasina.
Ny sisa tavela tamin'ny dian-trano taloha sy ny ala honko dia manaloka ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny Grenville Bay, Grenada. Sary © Marjo Aho
Ny fiarovana ny karbaona blaogy dia sasantsasany amin'ireo zava-manahirana indrindra eran-tany. Teo anelanelan'ny 340,000-980,000 ha dia rava isan-taona. ref
Ny fahaverezan'ny vidin-tsolika momba ny ecosystem bleu:
20% of honko (nanomboka ny taona 1980); 30-50% (nanomboka ny taona 1940) ref
25% of honahona nanomboka tamin'ny 1880 ref
29% of seagrass Lasa very ny ahitra (hatramin'ny 1879) ref
Ny tahan'ny fanjifan'ny tontolo iainana karbonika manga dia 0.7 - 7% isan-taona. ref Rehefa simba na very izy ireo, dia afaka avoaka ny gazy karbonika ao anaty ranomasina sy ny rivotra. Ohatra, gazy karbonika kilaometatra 1.02 tapitrisa taonina no navotsaina isan-taona tamin'ny alàlan'ny sisan-javatry ny tontolo iaianana amoron-dranomasina, mitovy amin'ny 19% amin'ny alàlan'ny famoahana ala matevina maneran-tany. ref